ONOW Myanmar isaleading social enterprise in Myanmar. Join ONOW in the development of innovative and exciting training, coaching and education programs. The Program Assistant will work with the Program Coordinator to deliver the STARTUP Entrepreneurship Training Program. Subject areas include: Financial Skills, Small and Growing Business, and Digital Literacy.
The candidate should be passionate about the economic and social empowerment of Myanmar people through technology, training and coaching.
The program assistant will learn ONOW tools and methods for entrepreneur support in the STARTUP Program. This position will support and assist the Program Coordinator in recruiting, marketing, training program and planning. The Program Assistant will work directly with small business owners around Yangon.
Training assistance and delivery
Willing to work Saturdays or Sundays
Interested to work for community development
Willing to perform other tasks assigned by the Project Coordinator
Skilled use of mobile phone and online application technologies
This position reports to the STARTUP Program Coordinator. This position is based in the Yangon head office.
ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အိုနောင်းမြန်မာသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမှူအကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းများ၊ ပံ့ပိုးလမ်းညွှန်မှူများနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူများကို ဆန်းသစ်သောနည်းစနစ်များဖြင့် တီထွင်မှူများပြုလုပ်နေတဲ့ အိုနောင်းမြန်မာမှာ အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
လျှောက်ထားမည့်သူမှာ မြန်မာပြည်သူများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များကို နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး ကူညီပေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးလမ်းညွှန်မှူများပေးရန်အတွက် စိတ်အားထက်သန်မှု ပြင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ။ Programအား ထောက်ပံ့ပေးသုအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအသေးစားများအား ထောက်ပံ့ပေးသည့် အစီအစဉ်အတွက် အိုနောင်းမှ သင်တန်းအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများနှင့် နည်းစနစ်များကို လေ့လာနိုင်ရမည်။ လျှောက်ထားမည့်သူသည် သင်တန်းသားစုဆောင်းခြင်း၊ သင်တန်းအတွက်ကြော်ငြာများပြုလုပ်ခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းများတွင် Program Coordinatorအား အကူအညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရမည်။ လျှောက်ထားမည့်သူသည် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အတူ အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
Programနှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
စသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သောတာဝန်များကို လိုအပ်သလို လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
စနေ သို့မဟုတ် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်
အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အားကောင်းရမည်
Project Coordinator၏ အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရမည်
Mobile Phone နှင့် Online Application များအား ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်
လျှောက်ထားမည့်သူသည် STARTUP Program Coordinator အား တိုက်ရိုက်သတင်းပို့တင်ပြခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားမည့်သူသည် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်အတွက်ဖြစ်သည်။
Citizens I.D Limited Login to view salary
Youth International College Login to view salary
Project Officer (Admin/Finance)
Mekong Economics Login to view salary
Media Business General Manager